साक्षात्कार: क्यानाडा कसरी छ?aCanadian - 1aviagem.com
साक्षात्कार: क्यानाडा कसरी छ? क्यानाडाले
अघिल्लो पोस्ट: ब्राजिलियाको चुनाव नभएसम्म मैले के गर्नु पर्छ?
अर्को पोस्ट: बेलारूसी नागरिकका लागि बेलारूस
पोष्ट गरिएको 31 अक्टोबर 2018 द्वारा रोमोमो लुकाना
आज हामी क्यानाडा को उत्तरी अमेरिका को यस महान देश को बारे मा अधिक कुरा गर्नेछौं।
यो समय क्यानेडियन नागरिकको परिप्रेक्ष्यमा।
हामी कसरी एकअर्कालाई थाहा छ?
मैले रूस र छिमेकी देशहरू मार्फत यात्राको क्रममा फिनल्याण्डमा एन्डीलाई भेटें।
त्यो यात्राको दौरान मेरो कोठामा थियो। र हामी कहिलेकाहीं सामाजिक सञ्जालहरूसँग सम्पर्कमा छौँ।
म आज मेरो क्यानाडा मित्रसँग कुरा गर्छु जसले हामीलाई क्यानाडा, विश्वको दोस्रो ठूलो देश, विस्तारमा रूसलाई मात्र दोस्रो बारेमा बताउनेछ।
यो ब्लग पढ्नेहरूको लागि सुविधा दिनको लागि, जब म पाठ बोल्छ उसको रंग सेतो हुनेछ। जब यो एंडी छ भने पाठ रातो हुनेछ।
1- अण्डा, तपाईं कहाँ जन्मे र आज तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ?
"म सेन्ट जॉनको, नयाँफाउन्डल्याण्ड र ल्याब्राडोरको प्रांतीय राजधानीमा जन्मिएको थियो। म अझै पनि यहाँ बस्छु, उपरबर्गमा केन्द्र नजिकैको।
2- तपाईंको काम के हो?
"म एक जहाजको मुख्य अधिकारी हुँ जुन संयुक्त राज्य र क्यानाडाको बीचमा परिसर गर्दछ।
3- तपाईंले कहिल्यै देख्नुहुने स्क्रैर्य चीज के थियो? (जहाज वा भूमि मा रहन सकिन्छ)।
"केही नराम्रो समुद्र र जहाजमा आगो पनि।"
4- के क्यानाडामा तपाईलाई राम्रो मनपर्छ?
यो एक धेरै सुरक्षित र शांत देश हो।
5- यदि तपाई सक्नुहुनेछ भने तपाई त्यहाँ त्यहाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
- चिसो मौसम र धेरै उच्च कर।
6- राजनीतिको बारेमा बोल्दै, मैले एक पटक पढें कि क्यानेडामा सरकारको3छ। यो केहि थियो: यो राजतन्त्र छ (र यो देखिन्छ कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय, युनाइटेड किंगडमको, राजा थियो)। एक राष्ट्रपति, वा राज्यपाल, र अन्तमा एक प्रधान मंत्री पनि। वाह, यो एक देशमा! तर त्यो सत्य थियो? र तिनीहरूले राम्रो काम गर्छन्? तिम्रो धारणा के हो?
- हो, जानकारी सही छ। ब्राजिल वा संयुक्त राज्यको विपरीत, रानी राज्यको हाम्रो टाउको हो र प्रधान मंत्री सरकारको प्रमुख हो। हाम्रो सरकार अष्ट्रेलियाको जस्तै छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुउउउ हुनुहुन्छ। मलाई सामान्यतया उसले राम्रो काम गरिरहेको छ। निस्सन्देह त्यहाँ सरकारमा चीजहरू छन् जुन म सहमत र सहमत छु। उदाहरणको लागि कर हालको वर्षहरूमा धेरै बढेको छ, जुन केहि कुरा हो कि म सरकारसँग असहमत छैन, तर राजनीतिक स्थिरता यहाँ धेरै राम्रो छ, जुन म सहमत हुन्छु र मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्छ।
7- क्यानाडामा भ्रमण गर्न वा भ्रमण गर्नको लागि तपाइँ कुन पर्यटकलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ?
- नियाग्रा फल्स! यो देशमा सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण हो। यो साँच्चै अविश्वसनीय छ। मेरो न्यूफाउन्डल्याण्ड टापु अगस्तमा भ्रमण गर्न उत्कृष्ट छ। यस समय धेरै त्यस्ता उत्सवहरू छन्। र मौसम अनुकूल छ जब मात्र केही महिना हो। जाडोको समयमा कथा अलग छ।
8 - संयुक्त राज्य र क्यानडाबीच सम्बन्ध कसरी छ? के तिनीहरू बहिनी देशहरू जस्तै छन् वा फरक फरक छन्? म यो सोध्दछु किनभने तपाईं मेक्सिको र संयुक्त राज्यको बारेमा धेरै कुरा सुन्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई उत्सुक थियो कि उनि क्यानियियनहरु को उपचार कसरि गर्छन र राम्रो तरिकाले उपचार गर्छन।
"म अमेरिकामा किनारामा कम्तीमा एक पटक व्यापारमा एक पटक पार गर्दछ, र अर्को पटक मजाको लागि, र मलाई सीमामा कुनै पनि समस्या छैन। जब क्यानाडाको एक ठूलो विमानस्थलबाट अमेरिका भ्रमण गर्दा हामी वास्तवमा क्यानाडा छोड्न अघि अमेरिकी सीमा र सीमाको गश्तीलाई सफा गर्दछौं, त्यसैले जब हामी अमेरिकामा जान्छौं, हामीलाई प्रविष्टि गर्न प्राधिकरणको लागि कसैलाई हेर्न आवश्यक छैन। यो धेरै सजिलो छ। हाम्रा देशहरू नजिकै जडान भएका छन् तर सरकार, सोच र अन्य पक्षहरूको रूपमा फरक छ।
9- के तपाईंले कहिल्यै ब्राजिल भ्रमण गर्नुभएको छ? यदि हां भने, तपाई के सोच्नुहुन्छ?
- दुर्भाग्यवश म ब्राजीलसँग अझैसम्म छैन, तर म अर्को2वा3वर्षहरूमा जाने योजना बनाउँछु। लामो समयसम्म म दक्षिण अमेरिका भ्रमण गर्न चाहन्छु। सौभाग्य देखि अब क्यानाडा र दक्षिण अमेरिका को बीच अधिक उडान छ।
10- के तपाईं कहिल्यै सुनामीमा हुनुभयो वा जहाजसँग दुर्घटना भएको छ?
"सौभाग्य देखि नहीं, तर म भयानक तूफान को माध्यम ले7मीटर या अधिक को तरंगों संग भएको छ। जहाजमा हामी मौसमलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहन्छौं र बंदरगाहमा आश्रय गर्दछौं वा आश्रित खण्डमा लन्डन गर्न को लागी तूफानको प्रतीक्षामा पर्दछ।
11: तपाईं त्यस यात्रा पछि रूस फर्कनुभयो?
- हो, म फिर्ता आयो। म मास्कोमा चार चोटि भएको छु। मलाई लाग्छ कि म आदी छु भनेर भन्न सक्छु। मैले केही पूर्व सोभियत गणतन्त्रको भ्रमण गरेका थिए: यूक्रेन, बेलारूस, जर्जिया र कजाखस्तान। यो जाडो, म अजरबैजान र उजबेकिस्तान भ्रमण गर्न चाहन्छु।
- वाह, कितने नयाँ देशहरु, मलाई लाग्छ कि अर्को अन्तर्वार्ता उनको साथ हुनेछ जुन तिनीहरूमध्ये एकमा रहन्छ।
र यहाँ हामी आज हाम्रो अन्तरवार्ता समाप्त गर्छौं!
- अवसरको लागि धन्यवाद, यो तपाइँको प्रश्नहरूको उत्तर दिन र भाग लिनको लागि खुशी छ।
मलाई आशा छ कि तिमी पनि मेरो साथ सबै राम्रो छ।
म सहभागीको लागि धन्यवाद। स्थानीय नागरिकको दृष्टिकोणबाट देश जान्न यो धेरै रोचक छ।
म नियागरामा लिङ्क छोड्ने मौका लिन्छु, किनभने हाम्रो साक्षात्कारले उद्धृत गरेको छ, तपाईले पढेका व्यक्तिलाई शहरको सानो थाहा हुन सक्छ:
एक ठूलो गले अण्डा। धन्यवाद!
(यो विश्वप्यापी जस्तै तलका विश्वप्यापीमा थप पोष्टहरू हेर्नका लागि तल देखाउनुहोस्)।
साक्षात्कार 1aviagem बेलारूस क्यानाडा क्यानाडा waterfalls सिटी एलिजाबेथ II साक्षात्कार USA frontier जाडो जस्टिन ट्रूडाउ Labrador विश्व नक्शा जहाज न्यूफाउंडल्याण्ड niagara रूस पर्यटक